को टाई लागि हब कस्तो हुनुपर्छ?
हरेक मानिसको दराज त्यहाँ सम्बन्धहरु छन्। तिनीहरूको संख्या गतिविधिको प्रकार र मालिक को स्वाद फरक हुन सक्छ। यो सहायक छनौट लागि मुख्य मापदण्ड यसको गुण हो। तिनीहरूले इटालियन कारीगरों द्वारा रेशम, हस्तनिर्मित मा Nicest सम्बन्ध मानिन्छ। यो राम्रो गुण अन्तर्गत वा फाइबर संग admixture मा कृत्रिम रेशम कपडा छ। सम्बन्ध ऊन, कश्मीरी, सनी या सिलना हुन सक्छ कपास। तर Viscose चाँडै यसको आकार र रूप अनुपलब्ध।
टाई यस्तो लम्बाइ हुनुपर्छ भन्ने बेल्ट लाइन तल आफ्नो टिप तल बनाउन पछि। चयन ज्याकेट lapels को चौडाई र यो भाग को चौडाई आधारमा। औसत 7-9 सेन्टिमिटर बीच फरक हुन्छ। को टाई गाँठ तंग छ। यो सम्भव छ हुनत मुख्य पाश देखि एक निस्कनुहोस् मा disposed एक गुना गर्न।
सेतो शर्ट विरुद्ध गाढा टाई औपचारिक लुगा को क्लासिक फारम मानिन्छ। यसलाई आफ्नो रंग हल्का कोट सिर्फ एक टोन हुनेछ जब हेर्नेछौं यस्तो सहायक गर्न सबै भन्दा राम्रो छ।
को टाई शर्ट कलर अन्तर्गत प्रत्यक्ष नोड knotted। यो प्रक्रिया पछि, सहायक यसको अधिकतम लम्बाइ प्राप्त त्यसैले, यो यो व्यापक मिड-लम्बाईहरू को स्तर मा एक संकीर्ण मार्जिन हुन बाहिर गरिएका भनेर कलर वरिपरि जोडेको गर्न आवश्यक छ। लाउने र टाई tidying बनाउन सामाग्री माथि-कस छैन पक्का, र बिस्तारै ड्रप डाउन।
सुन्दर टाई छलछामको गाँठो बाँध गर्न, यो कसरी गर्न जान्न आवश्यक छ। प्रक्रिया विशेष मा ऊतक प्रकार जो देखि सहायक सिलना छ सिधै निर्भर हुनुपर्दछ, र ढाँचा शर्ट को विशेषताहरु मा, - यसको कलर। धेरै बाक्लो संग सम्बन्ध समर्थन कपडा, एक क्लासिक नोड सिद्ध हेर्न हुनेछ। र यो पनि कुनै पनि आकार कलर शर्ट फिट। तसर्थ, यो एक क्लासिक एकाइ साँच्चै विश्वव्यापी छलफल गर्न सकिन्छ। यो एक थोडा लम्बी आकार छ देखि, त्यसपछि नेत्रहीन कलर माथिको घाँटी lengthens।
एक ठूलो हदसम्म एक टाई गाँठ र यसको आयाम फैशन रुझान द्वारा dictated छन्। यो एक ज्याकेट संग carelessly वा संयुक्त बनेको छ जो एक नोड, बाँधिएको छ भने सबैभन्दा महंगा र सुन्दर सहायक धेरै राम्रो हेर्न छैन। उदाहरणका लागि, संकीर्ण सम्बन्धहरु लागि साइटहरु चयन गर्न, यो डिजाइनर संग परामर्श गर्न आवश्यक छ। उहाँले यस प्रकारको लागि आदर्श छ जो कि विकल्प, टिप्न हुनेछ। यो सहायक लागि सबै भन्दा राम्रो भनिन्छ नोड देखिन्छ "राजकुमार अल्बर्ट"। यो धेरै संकुचित छ र भागहरु उहाँलाई लागि एक नरम कपडा संग चयन गर्नुपर्छ।
लामो समय को लागि तपाईं कुरा मात्र ठीक उनको हेरचाह गर्नुपर्छ, तर पनि उचित भण्डारण गर्न, सेवा गरे। गाँठ तपाईं फाइबर फैलयो छैनन् कपडा वा मोड गर्न unleash गर्न आवश्यक सबै समय बाँध। खुम्चिएकोपेपरर एक भ्कुन्डाउने साधन सहायक अवश्य पर्खनुहोस्। उच्च गुणस्तरीय टाई ironed गर्न सकिँदैन वा धोए। यो सुक्खा सफाई मा साफ वा दाग रिमुभर प्रयोग गर्न आवश्यक छ। बाहिर सानो झुर्रियाँ चिकना गर्न, तपाईं ध्यान दिएर माथि रोल गर्न बाँध र यसलाई त्यहाँ बिहान सम्म छोड्न आवश्यक छ। बिहान द्वारा तिनीहरूले गएका थिए। फलाम सतह चमक देखि रेशम कपडा हराउँछ, र यसको फाइबर बिग्रेको छ। फलस्वरूप, यस टाई स्थायी क्षतिग्रस्त हुनेछ।
"तले-माथि" स्टोर को श्रृंखला। सफलता को रहस्य
रेडियो रिसीभर डीजेन 1103: एउटा समीक्षा, वर्णन, विशेषताहरू र समीक्षाहरू
Rh कारक रक्त प्रकार र rh-संघर्ष
प्रदर्शन "सूप canaries": समीक्षा दर्शकहरूलाई
ऐतिहासिक ज्ञान को विकास को मुख्य चरणमा। ऐतिहासिक विज्ञान को विकास को चरणमा
विभिन्न सतहहरु मा रंग को खपत के हो?
प्रणाली आवेदन मान्य Win32 आवेदन छैन भनेर बताउँदै एक सन्देश प्रर्दशन गर्दछ। के गर्ने?